OpenEXPO: Chema Alonso pane zvakadzika uye kusagadzikana kwekuchengetedza | Linux Vakapindwa muropa
OpenEXPO: Chema Alonso inotaura nezve zvakadzika uye nezvinetso zvitsva zvekuchengeteka
Isaac | | Misangano / Zviitiko / Hurukuro
OpenEXPO Virtual Zvakaitika 2021 had mubatsiri akasarudzika, sezvakaita Chema Alonso. Nyanzvi inozivikanwa yekuchengetedza yaizopawo musangano pamisoro inonakidza senge cybersecurity uye kuti yakadzika sei uye AI inogona kuchikanganisa.
Uye ndezvekuti, nekufambira mberi kwehungwaru hwekunyepedzera, cybersecurity inosangana nematambudziko matsva. Parizvino, chitupa chinogona kubvisirwa zvakapusa neAI, zvichipa kukwira kwechiitiko che pakadzika mafashama emafashama enhau neInternet.
A DeepFake inobvumira, semuenzaniso, kushandisa vhidhiyo iripo nehumwe hunhu uye chinja chiso chako kune chimwe, pamwe nekuisa izwi rakaumbirwa riri kutaura mazwi raisazombotaura. Chinhu chinogona kutungamira mukunyepedzera kunotyisa, kunyanya kana chikashandiswa kupesana nevatungamiriri vezvematongerwo enyika kana kugona kukuru kufurira vanhu.
Nhasi vave imwe yehunyanzvi hwakaomesesa hwekuparadzira nhema nhau uye disinformation mishandirapamwe. Ivo vanogona kunyange zvakanyanya kukurudzira kuwedzera kwekubatwa kwe cyber, sekutaura kwakaita Chema Alonso kubva kuOpenEXPO Virtual Experience.
Uye hwakaipa zvakanyanya kunetseka kupfuura zvinoita. Kusvikira 2019 pakange paine asingasviki 15.000 akadzika anotenderera paInternet. Muna 2020 yaive angangoita zviuru makumi mashanu emanyepo, 96% yeavo ehupombwe. Uye iyo nhamba haimire kukura, ichiunza matambudziko matsva ekuchengetedza cyber.
Zvekuonekwa kweaya akadzika, Chema Alonso anongedzera maitiro maviri ekuongorora:
Forensic kuongorora yemifananidzo.
Kubviswa kwe data yehupenyu kubva pamifananidzo.
Nyanzvi ine mukurumbira yakapinda mumusoro uyu muhurukuro yake yeOpenEXPO Virtual Zvakaitika 2021, uye pamwe chete nechikwata chake, ave kukwanisa kugadzira plug-in yeiyo Chrome webhu browser nawo chero mushandisi anogona kusarudza vhidhiyo uye kumhanyisa bvunzo kuti aone izvi DeepFakes.
Iyi plugin inoshandisa 4 tsvakurudzo yesainzi kurwa neunyengeri uhu:
FaceForensics ++: macheki anoenderana nemodeli yakadzidziswa pane yayo dhatabhesi.
Kufumura DeepFake Mavhidhiyo nekutsvaga Kutarisana Nemeso Kuratidzira ArtifactsIkozvino AI maalgorithms anowanzo gadzira mifananidzo yesarudzo shoma, uye chishandiso ichi chinoona izvo zvinogumira nemhando yeCNN.
Kufumura Yakadzika Fake Uchishandisa Isingaenderane Musoro Poses- Shanduko inoitwa pakati pezviso zvekutanga uye zvakagadzirwa, saka izvo zvinokanganisa zvikanganiso mumusoro wemusoro mu3D. Neye HopeNet modhi, izvi zvisingaenderane zvinogona kuonekwa.
CNN-inogadzirwa Mifananidzo Iri Zvinoshamisa Nyore Kuti Spot… izvozvi: Zvinogona kusimbiswa kuti izvozvi mifananidzo inogadzirwa neCNN share zvakarongeka zvikanganiso.
Chibvumirano cheOpenEXPO inyaya inonakidza kwazvo uye chishandiso chakafanira zvakaenzana, sezvo aya akadzika ari iwo marongero ezuva ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » OpenEXPO: Chema Alonso inotaura nezve zvakadzika uye nezvinetso zvitsva zvekuchengeteka
Microsoft 365 uye Edge. Imwe nzira yekufunga muLinux
Slimbook EXECUTIVE: nyowani uye ine simba laptop kubva kuSpanish